နှာခေါင်း ပိတ်ခြင်းကို 15 မိနစ်တည်းနဲ့ သက်သာစေမယ့် နည်းလမ်းများ ⋆ Lovely Myanmar
နှာခေါင်း ပိတ်ခြင်းကို 15 မိနစ်တည်းနဲ့ သက်သာစေမယ့် နည်းလမ်းများ
By ku ku on Tuesday, June 11, 2019
အမြဲတမ်း နှာခေါင်း ပိတ်နေတဲ့သူတွေက နေရထိုင်ရခက်လို့ နှာခေါင်း ပိတ်တာကို မြန်မြန်ပျောက်ချင်ကြပါတယ် ။
6. မျက်ခုံးနှစ်ခုကြားကို နှိပ်နယ်ပေးပါ
မျက်ခုံးနှစ်ခုကြားကို ညင်ညင်သာသာ နှိပ်နယ်ပေးရင် ဦးခေါင်းခွံနဲ့ နှာခေါင်းပေါက် ဆက်သွယ်ထားတဲ့ လေလမ်းကြောင်း ရောင်ရမ်းတာကို ကာကွယ်ပြီး ဖြစ်စေပါတယ် ။
5. နှာခေါင်းတစ်လျှောက် နှိပ်နယ်ပေးပါ
နှာခေါင်းတစ်လျှောက်ကို တစ်မိနစ် ၊ နှစ်မိနစ်ကြာအောင် ညင်ညင်သာသာ နှိပ်နယ်ပေးရင် နှာခေါင်းအတွင်းက လေလမ်းကြောင်း ပွင့်သွားပြီး အသက်ရှူရတာ ကောင်းလာမှာပါ ။
4. နှာခေါင်းနဲ့ နှုတ်ခမ်းကြားက နေရာကို နှိပ်နယ်ပေးပ
အပေါ်နှုတ်ခမ်းနဲ့ နှာခေါင်းကြားကို နှစ်မိနစ်ကြာ နှိပ်နယ်ပေးရင် နှာခေါင်းအတွင်းက ရောင်ရမ်းတာတွေ မဖြစ်တော့ပါဘူး ။
3. လေစိုထိုင်းမှု ထိန်းစက်ကို အသုံးပြုပါ
လေစိုထိုင်းမှုက 40% ထက် နည်းတဲ့အခါ နှာခေါင်းထဲက နှာရည်တွေက ခြောက်သွားပြီး အသက်ရှူရတာ အဆင်ပြေသွားမှာပါ ။ နှာရည်တွေကများပြီး လေစိုထိုင်းဆက နည်းနေမယ်ဆိုရင် ကြောက်စရာကောင်းတဲ့ ဘက်တီးရီးယားတွေ ရှင်သန်နိုင်မှာပါ ။ အသင့်တော်ဆုံး စိုထိုင်းဓာတ်က 40 ရာခိုင်နှုန်းကနေ 60 ရာခိုင်နှုန်း အထိပဲ ဖြစ်ပါတယ် ။
2. နှာခေါင်းကို နွေးနွေးထွေးထွေး ထားပါ
အနွေးဓာတ်ပေးထားတဲ့ လက်ကိုင်ပဝါနဲ့ပဲ ဖြစ်ဖြစ် ၊ ရေနွေးထဲ ထည့်စိမ်ထားတဲ့လက်ကိုင်ပဝါနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ် အနွေးဓာတ်ပါတဲ့ လက်ကိုင်ပဝါနဲ့သာ နှာချေပါ ။ တော်သင့်ရုံ နွေးတဲ့ ရေနွေးလောက်ဆိုရင် အဆင်ပြေပါပြီ ။ နှာခေါင်းကို နွေးနွေးထွေးထွေး ထားရင် နှာခေါင်းပိတ်တာ သက်သာသွားမှာပါ ။
fitness, home, technology and diet concept – smiling teenage girl doing push-ups and looking at tablet pc computer at home
နှလုံးခုန်နှုန်းက ပုံမှန်ပဲဆိုရင် ၊ ခန္ဓာကိုယ်ကလည်း နွေးနေတယ်ဆိုရင် နှာခေါင်းပိတ်နေတာ မြန်မြန် သက်သာသွားမှာပါ ။ 15 မိနစ်ကြာအောင် လေ့ကျင့်ခန်း လုပ်ပေးလိုက်ရင် သွေးပူလာပြီး နှာခေါင်းပိတ်နေတာ အဆင်ပြေသွားမှာပါ ။
နှာခေါငျး ပိတျခွငျးကို 15 မိနဈတညျးနဲ့ သကျသာစမေယျ့ နညျးလမျးမြား
အမွဲတမျး နှာခေါငျး ပိတျနတေဲ့သူတှကေ နရေထိုငျရခကျလို့ နှာခေါငျး ပိတျတာကို မွနျမွနျပြောကျခငျြကွပါတယျ ။
6. မကျြခုံးနှဈခုကွားကို နှိပျနယျပေးပါ
မကျြခုံးနှဈခုကွားကို ညငျညငျသာသာ နှိပျနယျပေးရငျ ဦးခေါငျးခှံနဲ့ နှာခေါငျးပေါကျ ဆကျသှယျထားတဲ့ လလေမျးကွောငျး ရောငျရမျးတာကို ကာကှယျပွီး ဖွဈစပေါတယျ ။
5. နှာခေါငျးတဈလြှောကျ နှိပျနယျပေးပါ
နှာခေါငျးတဈလြှောကျကို တဈမိနဈ ၊ နှဈမိနဈကွာအောငျ ညငျညငျသာသာ နှိပျနယျပေးရငျ နှာခေါငျးအတှငျးက လလေမျးကွောငျး ပှငျ့သှားပွီး အသကျရှူရတာ ကောငျးလာမှာပါ ။
4. နှာခေါငျးနဲ့ နှုတျခမျးကွားက နရောကို နှိပျနယျပေးပါ
အပျေါနှုတျခမျးနဲ့ နှာခေါငျးကွားကို နှဈမိနဈကွာ နှိပျနယျပေးရငျ နှာခေါငျးအတှငျးက ရောငျရမျးတာတှေ မဖွဈတော့ပါဘူး ။
3. လစေိုထိုငျးမှု ထိနျးစကျကို အသုံးပွုပါ
လစေိုထိုငျးမှုက 40% ထကျ နညျးတဲ့အခါ နှာခေါငျးထဲက နှာရညျတှကေ ခွောကျသှားပွီး အသကျရှူရတာ အဆငျပွသှေားမှာပါ ။ နှာရညျတှကေမြားပွီး လစေိုထိုငျးဆက နညျးနမေယျဆိုရငျ ကွောကျစရာကောငျးတဲ့ ဘကျတီးရီးယားတှေ ရှငျသနျနိုငျမှာပါ ။ အသငျ့တျောဆုံး စိုထိုငျးဓာတျက 40 ရာခိုငျနှုနျးကနေ 60 ရာခိုငျနှုနျး အထိပဲ ဖွဈပါတယျ ။
2. နှာခေါငျးကို နှေးနှေးထှေးထှေး ထားပါ
အနှေးဓာတျပေးထားတဲ့ လကျကိုငျပဝါနဲ့ပဲ ဖွဈဖွဈ ၊ ရနှေေးထဲ ထညျ့စိမျထားတဲ့လကျကိုငျပဝါနဲ့ပဲဖွဈဖွဈ အနှေးဓာတျပါတဲ့ လကျကိုငျပဝါနဲ့သာ နှာခပြေါ ။ တျောသငျ့ရုံ နှေးတဲ့ ရနှေေးလောကျဆိုရငျ အဆငျပွပေါပွီ ။ နှာခေါငျးကို နှေးနှေးထှေးထှေး ထားရငျ နှာခေါငျးပိတျတာ သကျသာသှားမှာပါ ။
နှလုံးခုနျနှုနျးက ပုံမှနျပဲဆိုရငျ ၊ ခန်ဓာကိုယျကလညျး နှေးနတေယျဆိုရငျ နှာခေါငျးပိတျနတော မွနျမွနျ သကျသာသှားမှာပါ ။ 15 မိနဈကွာအောငျ လကေ့ငျြ့ခနျး လုပျပေးလိုကျရငျ သှေးပူလာပွီး နှာခေါငျးပိတျနတော အဆငျပွသှေားမှာပါ ။
H1N1(ရာသီ တုပ်ကွေး) မကူးစက် ခံရအောင် ကာကွယ် ဖို့ အဓိကလိုက်နာရမယ့် (၇)ချက်
H1N1 ကူး စက်မြန် တုပ်ကွေး အဆု တ်ရောင်ရော ဂါ လက္ခဏာများနှင့် ကြိုတင်ကာကွယ်နည်းများ
အသားအရေခြောက်သူတွေ အတွက် အသင့်တော်ဆုံးဖြစ်တဲ့ အစားအသောက်များ
Mobile Legends ဆော့ပြီး အဆဲခံနေရတာကြောင့် ပြတ်ပြတ်သားသား ပြောလာတဲ့ သန္တာဗိုလ် June 20, 2019
သရုပ်ဆောင် အကယ်ဒမီ ချောရတနာရဲ့ ညီမဖြစ်သူ သန္တာဗိုက သူမရဲ့ ရှည်လျားတဲ့ အရပ်အမောင်းနဲ့ အမိုက်စား ရုပ်ရည်ကြောင့် ယောကျာ်းလေးပရိသတ်တွေသာမက မိန်းကလေးပရိသတ်တွေလည်း အားပေးကြတာ ဖြစ်ပါတယ်။ သန္တာဗိုက မော်ဒယ်လောကမှာ ထိပ်ဆုံးက ရပ်တည်နေသူတစ်ဦးဖြစ်ပြီး သရုပ်ဆောင်အလုပ်ကိုလည်း ရံဖန်ရံခါ လုပ်သူတစ်ဦးဖြစ်ပြီး အောင်မြင်မှုတွေ များစွာ ရရှိနေတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ လူငယ်ပီပီ ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နေတတ်ပြီး လွတ်လပ်စွာနေတဲ့ သန္တာဗိုက လက်ရှိမှာတော့ Mobile Legend Game ကိုဆော့ရင်း အားလပ်ချိန်တွေကို ကုန်ဆုံးနေတာကို တွေ့ရပါတယ်။ အပျော်သဘောနဲ့ ဆော့တဲ့ Mobile Legend Game မှာ ဆဲဆိုကြတာကြောင့် သန္တာဗိုက သူမရဲ့ သဘောထားကို ပြတ်ပြတ်သားသားနဲ့ ဖေ့စ်ဘုတ်စာမျက်နှာကနေတဆင့် အခုလိုပဲ ပြောပြထားပါတယ်။ “Mobile Legends ဆော့တာလေ တချို့တွေဆဲဖို့ပဲသိတယ်နော်။ […]
” H1N1 လား ၊ သာမန်အအေးမိလား?” June 20, 2019
H1N1 တုပ်ကွေးရောဂါ ကြောင့် ရန်ကုန်တွင် လူသေဆုံးမှုများ ဖြစ်ပေါ်နေသည်ဟူသော သတင်းများကြောင့် မိဘပြည်သူများအကြားတွင် စိုးရိမ်ပူပန်မှုများ မြင့်တက်လာလျက်ရှိပါသည်။ ဆေးရုံဆေးခန်းများတွင်လည်း ရုတ်တရက် တုပ်ကွေးရောဂါ ကာကွယ်ဆေးများ သွားရောက်ထိုးနှံကြသောကြောင့် အချို့သော နေရာများတွင် ဆေးဝယ်ရခက်ခြင်း ကာကွယ်ဆေးပြတ်လပ်ခြင်းများ ဖြစ်ပေါ်လျက် ရှိနေပါသည်။ ယခုကဲ့သို့သော မိုးဦးကျရာသီသည် သာမန်အအေးမိနှာစေးသော ရောဂါများ အဖြစ်များသော ရာသီလည်း ဖြစ်ပါသည်။ H1N1 တုပ်ကွေးရောဂါ၏ ရောဂါလက္ခဏာများမှာလည်း သာမန်အအေးမိနှာစေးသော ရောဂါလက္ခဏာများနှင့် ဆင်တူနေပြန်ရာ မိဘပြည်သူများအနေဖြင့် နားလည်မှု လွဲမှားပါက မလိုလားအပ်သော နစ်နာမှုနှင့် စိုးရိမ်မှုများ ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်ပါသည်။ သာမန်အအေးမိသည်ကို H1N1 ဖြစ်နေပြီဟု အထင်မှားပါက မလိုလားအပ်သော စိုးရိမ်မှုဖြင့် ငွေကုန်လူပန်း ဖြစ်ကြရပြီး H1N1 တုပ်ကွေးရောဂါ ဖြစ်နေသည်ကို သာမန်အအေးမိသည်ဟု ပေါ့ဆမိပါကလည်း မလိုလားအပ်သော […]
“ဖန်တီးမှုအသစ်အဆန်းတွေနဲ့ ပရိတ်သတ်တွေကို ထပ်မံဖမ်းစားအုန်းမယ့် လွှမ်းပိုင်ရဲ့သီချင်းအသစ်ရိုက်ကွင်းပုံရိပ်များ။” June 20, 2019
ချစ်ပရိတ်သတ်ကြီးရေ…. လူငယ်ပရိတ်သတ်တွေကြားမှာရေပန်းစားတဲ့သီချင်းတွေ ခေတ်ကာလရေစီးကြောင်းနဲ့ အရမ်းကိုလိုက်ဖက်ကိုက်ညီတဲ့သီချင်းတွေကို သီဆိုတတ်တဲ့ Hip Hopအဆိုတော် လွှမ်းပိုင်ဆိုတာ နိုင်ငံကျော်တစ်ယောက်ပါနော်။ကာရံတွေကို အထာကျကျချိတ်ဆက်ပြီး Rapတွေကို Twist ဆန်ဆန်အမြန်တွေသီဆိုတတ်တဲ့အတွက် ပရိတ်သတ်တွေရဲ့အထူးသတိထားခြင်းကိုခံရသူလေးဆိုလည်းမမှားပါဘူးနော်။ သူမနဲ့မတူတဲ့ တီထွင်ဖန်တီးမှုတွေ သီဆိုဟန်တွေကြောင့် လူငယ်ပရိတ်သတ်တွေတင်မကဘဲ လူကြီးပရိတ်သတ်တွေကပါလက်ခံအားပေးခြင်းခံခဲ့ရပါတယ်နော်။ သူဟာဂီတပိုင်းတင်ထူးချွန်တာမဟုတ်ဘဲ သရုပ်ဆောင်ပိုင်မှာလည်း အားပေးခြင်းခံရပြီးတော့ ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီးတွေကိုလည်း များစွာရိုက်ဖြစ်နေပါတယ်နော်။သူဟာ လတ်တလောမှာတော့ သီချင်းအသစ်တွေထွက်နိုင်ဖို့အတွက်လုံးပန်းနေခဲ့ပါတယ်နော်။ Wish You Have A Better Day ဆိုတဲ့ သီချင်းMVအသစ်လေးကို မကြာခင်ရက်ပိုင်းကပဲ ပရိတ်သတ်တွေလက်ထဲကိုအရောက်ထည့်ပေးခဲ့ပြီးတော့ အခုတစ်ခါမှာလည်း ကြည်ဖြူမယ်ဆိုရင် ဆိုတဲ့ သီချင်းMVလေးကိုလည်း ရိုက်ကူးနေခဲ့ပြန်ပါပြီနော်။ ဒီသီချင်းလေးကိုတော့ မင်းသမီးချောလေး မေမြင့်မိုရ်ကပါဝင်ပြီးတော့ သရုပ်ဆောင်ထားပါတယ်နော်။ တချိန်ကတက္ကသိုလ်ကျောင်းသားဘဝမှာ ကိုယ်ချစ်ရတဲ့သူကြောင့် ဖြစ်ခဲ့ဖူးတဲ့ ခံစားခဲ့ရဖူးတဲ့ အကြောင်းအရာလေးတွေကို ရေးစပ်ထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်လို့သိရပါတယ်နော်။ ကဲ… သီချင်းမထွက်ခင်လေးမှာ ရိုက်ကွင်းနောက်ကွယ်ကပုံရိပ်လေးတွေကို ရသေ့စိတ်ဖြေကြည့်လို့ရအောင် […]
“ချစ်သူ ရည်းစား မရှိတဲ့ ၊ တစ်ကိုယ်တည်းသမား ပိုကျန်းမာကြောင်း လေ့လာတွေ့ရှိ။ June 20, 2019
ချစ်သူ ရည်းစား မရှိတဲ့ ၊ တစ်ကိုယ်တည်းသမား ပိုကျန်းမာကြောင်း လေ့လာတွေ့ရှိ ချစ်သူ ရည်းစား မရှိတဲ့၊ တစ်ကိုယ်တည်းသမား ဘ၀ဟာ ပီးပြည့်စုံခြင်း မရှိပဲ ဟာတာတာကြီး ဖြစ်နေတယ်လို့ သင် ခံစားနေရပါသလား။တကယ်တော့ ချစ်သူ ရည်းစားထားပီး စိတ်ရော၊ ကိုယ်ပါ မကျန်းမမာ ဖြစ်နေတဲ့ သူတွေ အများကြီးပါ။ သုတေသီတွေရဲ့ အဆိုအရ တစ်ကိုယ်တည်း ဖြစ်နေခြင်းဟာ အဲ့ဒီလူကို ပိုမို ကျန်းမာစေရုံမက စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာမှာလည်း ပိုလုံခြုံမှု ရှိစေပါတယ်တဲ့။ ကဲ တစ်ကိုယ်တည်း သမားတွေ ရရှိ ခံစားနေရတဲ့ ကောင်းကျိုးလေးတွေ ကြည့်ကြရအောင် (1) အားကစား လေ့ကျင့်ခန်းတွေ ပိုလုပ်နိုင်လာတယ် စိတ်ကျရောဂါ ၊ နှလုံးရောဂါ ရစရာ အချစ်ရေး၊ အိမ်ထောင်ရေးတွေကနေ ကင်းကွာနေတာမို့ သင့်ကိုယ်သင် […]
မန္တလေးမှာ ပိုက်ဆံလုံးဝပေးစရာမလိုဘဲ ဒံပေါက် အလကားကျွေးတဲ့နေရာ တစ်ခု June 20, 2019
မန်းလေးမှာမနက်လေးနာရီထိုးဗိုက်ဆာလျှင်ဆာလောင်နေသူများအတွက်ဝေငှခြင်း ၁။ ၃၅လမ်းနှင့် ၇၅ လမ်းဒေါင့်သို့သွားပါ ၂။ ကရ၀ိတ်ကဖေးကိုတွေ့ပါလိမ့်မည် ၃။ မည်သည့်အစားအသောက်မှမရောင်းတော့ပါ ၄။ ဆိုင်ရှေ့စားပွဲတစ်ခုတွင် ” ဆာလောင်နေသူများ အတွက် ကရ၀ိတ်ကဖေးမှ ဝေငှခြင်း ” ဗီနိုင်းကပ်ထားသော စားပွဲခုံပေါ်ရှိ ဒန်ပေါက်ဘူးဗျားအား တန်းစီပီး ယူငင်စားသုံးနိုင်ပါသည် ၅။ အသားတော့မပါပါ ၆။ ပိုက်ဆံပေး၍၀ယ်မရပါ။ အလကားယူမယ်ဆိုမှသာပေးပါသည် ချစ်ခြင်းများစွာဖြင့်အရည်ကြို မှတ်ချက်။ ကိုယ်တိုင်တန်းစီ Unicode ဖြင့်ဖတ်ရန် မနျးလေးမှာမနကျလေးနာရီထိုးဗိုကျဆာလြှငျဆာလောငျနသေူမြားအတှကျဝငှေခွငျး ၁။ ၃၅လမျးနှငျ့ ရ၅ လမျးဒေါငျ့သို့သှားပါ ၂။ ကရဝိတျကဖေးကိုတှပေ့ါလိမျ့မညျ ၃။ မညျသညျ့အစားအသောကျမှမရောငျးတော့ပါ ၄။ ဆိုငျရှစေ့ားပှဲတဈခုတှငျ ” ဆာလောငျနသေူမြား အတှကျ ကရဝိတျကဖေးမှ ဝငှေခွငျး ” ဗီနိုငျးကပျထားသော စားပှဲခုံပျေါရှိ ဒနျပေါကျဘူးဗြားအား တနျးစီပီး ယူငငျစားသုံးနိုငျပါသညျ ၅။ […]
MISSHA Cosmetics Myanmar ရဲ့ Boss လေး ဇေမဒီလှိုင် June 20, 2019
နိုင်ငံကျော် ရုပ်ရှင်သရုပ်ဆောင် မင်းသမီးချော နန္ဒာလှိုင် ဟာဆိုရင် ပရိသတ်တွေချစ်ခင်အားပေးရတဲ့ နိုင်ငံကျော်အနုပညာရှင်တစ်ဦးပါ။ သူမသရုပ်ဆောင်ရိုက်ကူးခဲ့တဲ့ ဇာတ်ကားများစွာရှိတာကြောင့် သူမကို ချစ်တဲ့ ပရိသတ်အခိုင်အမာရရှိထားသူပါ။ အောင်မြင်မှုများစွာ ရရှိပိုင်ဆိုင်ခဲ့တဲ့ သူမက ခုဆိုရင် သူမချစ်တဲ့ မိသားစုလေးနဲ့ ဘဝကိုအေးချမ်းစွာဖြတ်သန်းနေတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီတစ်ခါမှာတော့ သရုပ်ဆောင် နန္ဒာလှိုင် ရဲ့ သမီးငယ်လေး ဇေမဒီလှိုင် ရဲ့ ပုံရိပ်ကလေးတွေကို ဆက်လက်ကြည့်ရူပေးကြပါဦးနော်။ နန္ဒာလှိုင် ရဲ့ သမီးငယ်လေး ဇေမဒီလှိုင်က ချစ်စရာကောင်းသူလေးပါ။ သူမက ဦးလေးဖြစ်သူ သရုပ်ဆောင် မောင် ကိုအလုပ်မှာ ID Card လုပ်ပေးဖို့ ပူဆာတာကြောင့် လုပ်ပေးလိုက်ရတယ်လို့ ပြောထားပါတယ်။ “မဒီလေး သူ့အတွက် ID Card လုပ်ပေးဆိုလို့ ချက်ခြင်းလုပ်ပေးရတယ်။ မပြီးမခြင်း အနားကကိုမခွာဘူး။” ဆိုပြီး ပြောထားပါတယ်။ […]
သာယာလှတဲ့နေရာလေးမှာ မိုးအေးအေးလေးနဲ့မို့ အလွမ်းတွေပိုတိုးစေတယ်ဆိုတဲ့ မအေးသောင်း June 20, 2019
ဟိုးလွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်တွေကတည်းက အောင်မြင်မှုတွေများစွာကို ရရှိခဲ့တဲ့ မင်းသမီးချောလေး အေးဝတ်ရည်သောင်းကတော့ လက်ရှိမှာ အနုပညာလောကထဲကို တစ်ကျော့ပြန်လည် ဝင်ရောက်လာပြီး ပရိသတ်အချစ်တွေကို သိမ်းပိုက်ထားသူလေးပါ။ လတ်တလောမှာတော့ မအေးသောင်းက အရမ်းကိုလန်းဆန်းနေတဲ့ သူမရဲ့ခရီးသွားပုံရိပ်တွေကို လူမှုကွန်ယက်မှာ ဝေမျှပေးထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ ကဗျာတွေစာတွေ အရမ်းရေးတတ်လွန်းတဲ့ မအေးသောင်းကတော့ သူမကိုယ်တိုင်လည်း ကဗျာလေးတစ်ပုဒ်လို လှနေတာပါနော်။ မိုမိုလေးချစ်ပရိသတ်တွေအတွက် အရမ်းကို လှပတဲ့ နေရာလေးဆီသို့ အလည်ရောက်ရှိနေတဲ့ မအေးသောင်းရဲ့ပုံရိပ်တွေကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်နော်။ မအေးသောင်းကတော့ “ဒီလိုပါပဲ ဒီလိုလတွေဟာ မိုးပိုရွာပြီး အလွမ်းပိုတိုးစေတာပါပဲ” ဆိုပြီး ချစ်သူကို ချွဲတဲ့ စာလေးနဲ့အတူ မိုးအေးအေးလေးနဲ့မို့ ပိုလွမ်းစေကြောင်းကို သူမရဲ့ ဖေ့ဘုတ်စာမျက်နှာပေါ်ကနေ ရေးသားဖော်ပြပေးထားခဲ့တာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ မိုးအေးအေးလေးနဲ့ ချစ်သူကိုလွမ်းနေတာလေးကလည်း အရမ်းကို ချစ်ဖို့ကောင်းနေရောပဲ မအေးသောင်းရယ်။ သရုပ်ဆောင်ပိုင်းမှာလည်း ပီပြင်လွန်းတဲ့ မအေးသောင်းကို သူမရဲ့ပရိသတ်တွေက […]
ကျန်းမာရေးကောင်းသွားပြီမို့ ဆေးရုံက ဆင်းလာပြီဖြစ်တဲ့ ထက်ထက်မိုးဦးရဲ့ပုံရိပ်တွေ June 20, 2019
လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်တွေက မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အအောင်မြင်ဆုံးနဲ့ အလှဆုံးသော ထိပ်တန်း မင်းသမီးတစ်ဦးအနေနဲ့ ရပ်တည်နိုင်ခဲ့တဲ့ မင်းသမီးချောလေး ထက်ထက်မိုးဦးကတော့ တလောကပဲ ကျန်းမာရေးမကောင်းလို့ ဆေးရုံတက်ခဲ့ရတာဖြစ်ပြီး သူမရဲ့ပရိသတ်တွေကလည်း အရမ်းကို စိတ်ပူနေကြတာပါ။ လတ်တလောမှာတော့ ထက်ထက်မိုးဦးက ကျန်းမာရေးကောင်းမွန်လာပြီမို့ ဆေးရုံကဆင်းလာပြီဖြစ်တဲ့အကြောင်း လူမှုကွန်ယက်မှာ ဝေမျှပေးထားတာ တွေ့ရပါတယ်။ ပရိသတ်တွေအရမ်းမြင်ချင်နေတဲ့ ထက်ထက်ရဲ့လတ်ဆတ်အေးချမ်းတဲ့ အပြုံးလေးတွေကိုတော့ ပြန်မြင်ရပါပြီနော်။ မိုမိုလေးချစ်ပရိသတ်တွေအတွက် ကျန်းမာရေးကောင်းလာပြီမို့ ဆေးရုံဆင်းပြီဖြစ်တဲ့ မင်းသမီးကြီး ထက်ထက်မိုးဦးရဲ့ပုံရိပ်တွေကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်နော်။ ထက်ထက်ရဲ့ပရိသတ်တစ်ဦးကတော့ “ဆေးရုံမှ ဆင်းပြီဖြစ်ကြောင်း ချစ်ထက် ချစ်ပရိသတ်ကြီးအား အသိပေးအပ်ပါသည် ဆုတောင်း မေတ္တာပေးပို့သူအယောက်ဆီတိုင်းကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော် ❤️” ဆိုပြီး ထက်ထက်မိုးဦးရဲ့ပုံရိပ်တွေကို လူမှုကွန်ယက်မှာ ဝေမျှပေးထားတာပါ။ ထက်ထက်မိုးဦးကတော့ လွန်ခဲ့တဲ့ရက်တွေက ကျန်းမာရေးမကောင်းတာကြောင့် ဆေးရုံမှာ ခွဲစိတ်ကုသမှုခံယူခဲ့ရတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ခွဲစိတ်ပြီးနောက် ကျန်းမာရေးကောင်းမွန်လာပြီဖြစ်တဲ့ ထက်ထက်မိုးဦးရဲ့ချစ်စရာပုံရိပ်လေး…။ […]
ကားနေတဲ့ မေးရိုးခွဲစိတ်ပြီးတဲ့နောက်မှာ ပုံလေးတွေ တင်ပေးလိုက်တဲ့ နေမင်း June 20, 2019
နိုင်ငံကျော်သရုပ်ဆောင်တစ်ဦးဖြစ်တဲ့ နေမင်းက အနုပညာလောကမှာ နေရာတစ်နေရာ အခိုင်အမာ ရရှိထားတဲ့သူတစ်ယောက် ဖြစ်ပါတယ်။ နေမင်းက ရုပ်ရှင်နဲ့ ဗီဒီယို ဇာတ်ကားတွေ အများအပြားမှာ သရုပ်ဆောင်ခဲ့ပြီး ပရိသတ်တွေရဲ့ ချစ်ခင်အားပေးမှုကို အပြည့်အဝ ရရှိထားတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ နေမင်းက လက်ရှိမှာလည်း သူချစ်တဲ့ အနုပညာလုပ်ငန်းတွေကို လုပ်ကိုင်နေတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ နေမင်းက သူ့ရဲ့ ကားနေတဲ့ မေးရိုးကို လွန်ခဲ့တဲ့ လပိုင်းကပဲ ကိုရီးယားမှာ သွားရောက်ပြုပြင်ခဲ့တာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ နေမင်းက ခွဲစိတ်ပြီး ရက်ပိုင်းအတော်ကြာပြီဖြစ်ပေမယ့် ဒီနေ့မှပဲ ပရိသတ်တွေကို သူ့ရဲ့ ပုံလေးတွေကို ချပြခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ နေမင်းက လွန်ခဲ့တဲ့ ရက်သတ္တပတ်က အဆိုတော် စစ်သွေးနဲ့အတူတူ ကိုရီးယားမှာ သွားရောက်ခွဲစိတ်ခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ စစ်သွေးကတော့ နှာခေါင်းခွဲစိတ်ပြုပြင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီး နေမင်းကတော့ သူ့ရဲ့မေးရိုးကို ပုံကျသွားအောင် […]
လူငယ်ဆန်ဆန် ခပ်မိုက်မိုက် လှနေတဲ့ အက်ရှင်မင်းသမီးလေး ယဉ်လတ်… June 20, 2019
လူငယ် အမျိုးသမီးသရုပ်ဆောင် အမျိုးသမီး များထဲမှ အက်ရှင် ဇာတ်ရုပ် နဲ့ ပရိသတ်တွေ လက်ခံအားပေးခြင်းခ့ထားရတဲ့ သရုပ်ဆောင် မင်းသမီးချောလေး ယဉ်လတ် ဟာဆိုရင် သရုပ်ဆောင်ပီပြင်ပြီးကျရာဇာတ်ရုပ်ကို သရုပ်ဆောင် နိုင်တဲ့ သူလေးပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ သူမသရုပ်ဆောင် ရိုက်ကူးထားတဲ့ ဇာတ်ကားများစွာ လည်း ရှိတာကြောင့် ချစ်တဲ့ ပရိသတ်အခိုင်အမာ ရရှိထားသူလေးတစ်ဦး ဆိုလည်းမမှားပါဘူး ။ ဒီတစ်ခါမှာတော့ မိုမိုလေး ရဲ့ ချစ်ပရိသတ်တွေအတွက် သရုပ်ဆောင် ယဉ်လတ် ရဲ့ အလှပုံရိပ်လေးနွေကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်နော်။ ယဉ်လတ်က နာရီတစ်ရာ့တစ်ဆယ် ဆိုတဲ့ တပ်မတော် ဇာတ်ကားကို အနုပညာရှင်များစွာ နဲ့ အတူ ရိုက်ကူးခဲ့ပါသေးတယ်။သူမသရုပ်ဆောင် ရိုက်ကူးထားတဲ့ လောကကြိုးဝိုင်းဇာတ်လမ်းတွဲ ကလည်း ခုဆို ပရိသတ်တွေ ကြည့်ခွင့်ရနေပြီပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ လတ်တလောမှာလည်း သူမပါဝင်သရုပ်ဆောင် […]